Basanta Basnet: 2013
छोरीले गुडिया किनी मागिन्–
'पापा, बाबी डल!'
घरबेटीकी नानीको जस्तै बाबी डल।
यसो खल्ती छामें, सुको भेटिनँ
बरु भित्री गोजीमा एउटा कविता भेटें
'किन यही कविताको गुडिया नबनाउँ्?'
Posted by Basanta Basnet at 2:33 AM 1 comment:
सुरुमा केही अवाञ्छित दृश्य प्रस्तुत छन्।
एक : मंगलबार दिउँसो नेविसंघको झन्डा बोकेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा प्रदर्शन गर्न जाँदै गरेका युवाले बसको छतमा बसेर बल्खु चोकमा 'भिसी कार्यालय जलाउछौँ, स्ववियु चुनाव गराउछौँ' भन्दै नारा लगाए। पंक्तिकारसहित वरपरका सवारी र पैदलयात्रुले तिनका अश्लील इसारा र वचन खपे। छाता ओढेर बाटो काट्दै गरेकी युवतीलाई तिनले हाकाहाकी दुर्व्यवहार गरे। 'स्ववियु चुनाव स्थगनमार्फत् खोसिएको हक फर्काउन हिँडेका' तिनको कसैले प्रतिवाद गर्ने हिम्मत गरेन।
दुई : विद्यार्थी संगठनका नेता चन्दा 'बार्गेनिङ' गर्न क्याम्पस प्रमुख वा विभागाध्यक्षकहाँ जान्छन्। प्रमुखले सर्त राख्छन् – 'पैसा दिन्छु, तिमीहरू प्रतिविद्यार्थी एकसय रुपियाँ भर्ना शुल्क बढाउन तयार हुन्छौ भने।' नेता कायल हुन्छ। संगठन अस्तित्वमा भएकै कारण विद्यार्थी मारमा पर्छन्।
तीन : त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसको स्ववियुमा मध्यरातमा आगजनी हुन्छ। छानबिन गर्न कोही तयार छैन। त्यहाँ कुनै न कुनै संगठनको हात छ भन्ने प्रशासनलाई थाहा छ। प्रशासक खतरा उठाउन चाहँदैनन्।
चार : शैक्षिक संस्थाभित्रै जथाभावी लेखिएका नाराले कक्षाकोठाका कुनै भित्ता बाँकी छैनन्। नारामा सहिष्णुता कतै झल्किँदैन।
पाँच : मास्टर्स सकेको व्यक्तिसँग आफ्नो बुतामा जागिर खाने हुति छैन। ऊ स्ववियु र संगठनको नेताको चाकरी गर्न थाल्छ। जागिर पायो भने ऊ प्राज्ञिक कामतिर होइन, संगठन, गुट, उपगुटको स्वार्थप्रति बफादार हुन्छ। विद्यार्थी नेता उसको 'बोस' हुन्छ।
छ : स्ववियु चुनाव कहिले आउला र टिकट पाउँला भन्ने आशामा एउटा युवा ढुकेर बस्छ। सधैँ क्याम्पसका प्रशासनदेखि क्यान्टिनसम्म भेटिन्छ। विद्यार्थीसँग हात मिलाउँछ। दैनन्दिन काममा सघाउँछ। टिकट भने उपरवाले नेताले आफ्नो चम्चालाई दिलाउँछ। नतिजा, परिश्रमी कार्यकर्ताको नाम बागी उम्मेदवारको सूचीमा भेटिन्छ। विद्यार्थी राजनीतिको भाग्य क्याम्पस बाहिरको 'प्रभु'ले लेखिदिन्छ। लाग्छ, विद्यार्थी नेताको भविष्य एउटा यस्तो खाली चेक हो, जहाँ विद्यार्थी स्वयंले सही गर्न पाउँदैनन्। अनि त्यसको मूल्य पनि पार्टी वा गुटले तोकिदिन्छ।
सातौं तथा अन्तिम दृश्य : स्ववियुलाई लघु संसद्/संविधानसभा भन्दै दलीय महŒवाकांक्षाको विषय बनाइन्छ। दलका नेता दस काम छाडेर क्याम्पस भाग लगाउँछन्। आफ्नो भागमा परेको क्याम्पसमा जसरी पनि आफ्नो भ्रातृसंगठन जिताउन लागिपर्छन्। वर्षौंदेखि पद ढुकेर अनेक संकाय चहार्दै भर्ना भएका विद्यार्थी नेता तिनका 'निमित्त नायक' बन्छन्। चुनाव नामको नाटक रचिन्छ। चुनिएर जाने अनुहारमा विद्यार्थी खोज्दा बिरलै भेटिन्छ।
Posted by Basanta Basnet at 3:04 AM No comments:
नेपाली साहित्यको केन्द्र काठमाडौं हो भन्यो भने धेरैलाई मन पर्दैन। दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि मन पर्दैन।
'नेपाली साहित्यका केन्द्र धेरै छन्,' मोटो फ्रेमभित्रका एकजोर आँखा चम्काउँदै उनी टेबल ठोक्छन्, 'जस्तो कि, बनारस पनि एउटा केन्द्र हो।'
photo : Bijay Gajmer/Nagarik
७५ वर्षअघि जनकपुरको सबेलामा जन्मेका दुर्गाप्रसाद पिता काशीबहादुर श्रेष्ठको नेपाली साहित्य सेवालाई आजसम्म निरन्तरता दिइरहेका छन्।
पाँच वर्षको छँदा बनारस हिँडेका उनी एकैचोटि २०१८ सालमा काठमाडौं आए। त्यसबेला नारायण बाँस्कोटा 'प्रगति' पत्रिकाका सम्पादक थिए। नारायणको उत्साह पाएर दुर्गाप्रसादले कविता लेख्न सिके। साथीकी छोरीको बिहे खान काठमाडौं पसेका उनी त कवि पो हुन पुगे, घच्चीका कवि।
नारायणले प्रस्ताव गरे, 'तिमी प्रेसको काम पनि जान्दा रहेछौ, अब यहीँ काम गर।'
त्यसपछि उनले लगातार दस वर्ष 'प्रगति'का लागि काम गरे।
उनले त्यसबीचमा पहिले नेपाली कथानक फिल्म 'आमा' का लागि संवाद लेखे। हीरा सिंहको निर्देशनमा बनेको त्यो फिल्मको प्रिमियर शो हेर्न राजा महेन्द्र जय नेपाल सिनेमा हल आए। पहिलोपटक फिल्मका लागि स्त्रि्कप्ट लेख्नेले राजाबाट दुई हजार रुपियाँ बकस पाए। बस्, दुर्गाप्रसाद यत्तिले काठमाडौंको कुलीन वृत्तमा चर्चित भए।
Posted by Basanta Basnet at 2:48 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 2:38 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 2:32 AM 1 comment:
हरेक वर्ष SLC रिजल्टसँगै आत्महत्या गर्नेहरुको खबर आउन थाल्छ। यो वर्ष पनि सुरु भइसकेको छ। एसएलसीलाई फलामे ढोका मान्दै जीवनमरणको प्रश्न बनाउनेहरु, छोराछोरी र विद्यार्थीमाथि आफ्ना अतिमहत्वाकांक्षा लाद्नेहरु यसका जिम्मेवार छन्। एकपटक सोचौं, कतै हामी त्यही अपराधका भागिदार भइरहेका त छैनौं। शिक्षा भनेको प्रेरक, मनोरञ्जक र रुचिकर हुनुपर्छ। पेलेर, थोपरेर पनि कहीँ शिक्षा हुन्छ?
Posted by Basanta Basnet at 6:50 AM No comments:
केही मालबाहक डिब्बाहरू छन्
विचारबाहक दिमागहरू पनि छन्
जहाज आइरहेछन् गइरहेछन्
म छु यी सब नियालिरहेको एक टक
Posted by Basanta Basnet at 12:00 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 12:04 AM No comments:
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्रका लागि नयाँ परिभाषा र 'कन्टेन्ट' बनाउने उद्घोष गरेका छन्। उनीसँग लामो समय सँगै रहेका एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्की भने नेकपा स्थापना दिवसको छेक पारेर सोमबार राजधानीमा बोल्दैथिए, 'समाजवाद आएको झुपडीले थाहा पाउनुपर्छ। काठमाडौंका दुई सम्भ्रान्त महिलाले नोकरीमा बढुवा पाएर हुँदैन।'
Posted by Basanta Basnet at 11:29 PM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 1:49 AM No comments:
राजेन्द्र थापाले 'खेलौना' उपन्यास लेखेपछि खगेन्द्र संग्रौला र उहाँबीच जुहारी जारी छ। नागरिक दैनिकको शनिबारे साहित्य परिशिष्टांक 'अक्षर' बाट साभारित उहाँहरुका धारावाहिक टिप्पणी–प्रतिटिप्पणी...
Posted by Basanta Basnet at 1:30 AM2comments:
शहीदको रगतलाई 'ग्लोरिफाई' गर्ने चलन संसारभर छ। वीर रसमा लिखित काव्य र भाषण पढ्दा/सुन्दा यही भेटिन्छ। युगपिच्छेका आन्दोलनले जनतासँग मुक्तिका लागि रगतको मूल्य तिर्न आह्वान गरेका छन्। जस्तो कि, सुवासचन्द्र बोसको भनाई प्रख्यात् छ, 'तिमी मलाई रगत देऊ, म तिमीलाई स्वतन्त्रता दिन्छु।' मार्टिन लुथर किङ जुनियर भन्छन्, 'मान्छेले कहिल्यै स्वतःस्फूर्त जित्दैन। न्यायको लडाइँमा बलिदान अनिवार्य छ।' भूपि शेरचन लेख्छन्, 'बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए।' माओवादीले सशस्त्र संघर्षताका देशभरका भित्ता रंगायो, 'शहीदको पंक्तिमा लामबद्ध होऔं।'
परिवर्तनको प्रक्रिया शान्तिपूर्ण बाटोबाट अघि बढ्छ भन्ने विश्वास अघिल्लो युगका मनिषीहरूमा देखिएन। अहिलेकालाई झन् हुने कुरो भएन। बुद्ध र गान्धीका वचनहरू विश्वविद्यालयमा पढाउन र चियापसलमा बुद्धिविलास गर्न खुबै उपयोग गरिए। सडकमा 'शहीदको रगतका टाटा आलै छन्' भनेर आन्दोलनकारीका नशामा पाइन भरियो। तिनै आह्वानको सनकमा इतिहासमा थुप्रै योद्धा 'बलिदानको कोटा चुक्ता गर्न' शहीदको पंक्तिमा चाहेर/नचाहेर, जानेर/नजानेर लामबद्ध पनि भए। छँदाखाँदाको करिअर छाडेर आन्दोलन गर्न हिँडेका उनीहरू इतिहास भइसके।
Posted by Basanta Basnet at 3:31 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 3:55 AM No comments:
Pic by Bijaya Rai
2013 February, Kathmandu
Posted by Basanta Basnet at 9:23 AM No comments:
@ JNU, New Delhi...
at Jawaharlal Nehru University, New Delhi.
Posted by Basanta Basnet at 9:19 AM No comments: